प्रयागराज : एक बोटानिस्ट- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मधेसमा बाढी आयो र हजारौं गरिबको उठिबास भयो। केही दिनपछि बाढीप्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न हेलिकप्टर चढे र प्रधानमन्त्री आए । उनी एक गरिबलाई देखे र स्तब्ध भए ।
असार २७, २०७७ नयनराज पाण्डे
‘हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री दलबहादुर एकाएक बेपत्ता हुनुभयो ।’ सहरमा हल्ला फैलियो र त्यो ‘हल्ला’ खबर बनेर फैलिँदैफैलिँदै सीमान्त गाउँको म रहेको मुकामसम्म पनि आइपुग्यो । मुलुक र मुलुकवासी कसैले पनि त्यो खबरमाथि विश्वास गरेनन् । मलाई पनि विश्वास भएन । तर, अन्तत: त्यो खबर सत्य सावित भयो । प्रधानमन्त्री साँच्चिकै हराएका रहेछन् ।
खबरमा भनिएअनुसार, अघिल्लो मध्यरातसम्म उनी केही कागजातहरूमा हस्ताक्षर गरेर सुतेका थिए । बिहान भने उनी आफ्नो ओछ्यानमै थिएनन् । उनी आफ्नो कार्यालयमा पनि फेला परेनन् र महलजस्तो सरकारी निवासमा पनि । उनको चस्मा उनकै कार्यालयको टेबलमै फेला पर्‍यो । उनको मोबाइल उनले प्रयोग गर्ने बाथरुममा फेला पर्‍यो । उनले लगाउने गरेको नक्कली दाँत उनको सरकारी निवासको डाइनिङ टेबलमै फेला पर्‍यो । उनको नाडीघडी उनकै कार्यालयको ड्रयरमा फेला पर्‍यो । उनको जुत्ता निवासको ढोकैमा फेला पर्‍यो । उनको हातमा ज्योतिषहरूले धारण गर्न दिएका मुगा, रुबी र नीलमका औंठीहरू उनको बेडरुमकै साइड टेबलमा फेला पर्‍यो । उनको कलम, सिगार केस र ह्विस्की राख्ने हिप फ्लास्क पनि निर्धारित ठाउँमै फेला परे । प्रधानमन्त्रीको चरित्र, आनीबानी र उनको रवाफिलो व्यक्तित्व जनाउने सबै सामग्रीहरू फेला परे । तर, प्रधानमन्त्री कतै फेला परेनन् । मुलुकले प्रश्न गर्न थाल्यो, ‘प्रधानमन्त्री हुन् कि तोरीको गोदाममा हराएको आलपिन ?’
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको मुटुमा पेसमेकर राखिएको थियो । जीवनपर्यन्त मुटुमै भइरहनुपर्ने त्यो पेसमेकर उनकै कुर्सीमा टिकटिक गरिरहेको थियो । यो सबैलाई तर्साउने खालको दृश्य थियो । के कसैले प्रधानमन्त्रीको हत्या गरेर उनको मुटुबाट पेसमेकर झिकेर थपक्क कुर्सीमा राखिदिएको थियो ? या बेपत्ता हुनुुअघि प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो मुटु खोतलेर पेसमेकर झिकेर त्यहाँ राखेका थिए ?
दुवै कुरा कहालीलाग्दा थिए । तर, सबैभन्दा कहालीलाग्दो कुरा त उनी गायब हुनु नै थियो । त्यो पनि बिनासूचना । कुनै उपप्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अख्तियारीसमेत नदिई ।
हजारौं सुराकी परिचालित भए । तर, कसैले पनि प्रधानमन्त्रीबारे कुनै सुराक फेला पार्न सकेन । मुलुकको गुप्तचर संयन्त्र पूरै मजाक सावित भएको थियो ।
तर, मुलुकलाई थाहा नभएको कुरा मलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री कहाँ बेपत्ता भए भन्ने कुराको म पूरा जानकार छु । म उनका बारेमा तपाईंलाई पूरै सूचना दिन सक्छु । तर, त्यसभन्दा पहिले तपाईंले मेरो यो एकालाप ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ ।
मेरो सर्त यही हो— मलाई पढ्नुस् । मलाई बुझ्नुस् । र, हराएका प्रधानमन्त्रीलाई फेला पार्नुस् ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । यो कुरा प्राथमिक कक्षादेखि नै तपाईंहरूले पढ्दै आउनुभएको हो । तपाईंका मातापिताले पनि यही पढ्नुभयो र तपाईंका सन्ततिहरू पनि त्यही घोक्दै छन् । विद्वान्हरूले आजपर्यन्त यही पढाइरहेका छन् । पढाइरहेका पनि के भन्नु, रटाइरहेका छन् । के उनीहरूलाई मानिसहरू असामाजिक भइदेलान् भन्ने शङ्का छ ? कतै उनीहरूलाई मानिस सामाजिक प्राणी हो भन्ने कुरामा नै संशय त छैन ?
मलाई भने संशय छ ।
मलाई संशय भएर के हुन्छ ? यो असामाजिक संसारमा मेरो सोच र संवेदनाको के अर्थ ? म किलोमा झुन्डिएको मैलो न मैलो कमिज न हुँ । मेरो अस्तित्व के ? मेरो हैसियत के ? मेरा बाहुलाका कुहिनाहरूमा प्वाल परेका छन् । कलरमा मयलको थुप्रो छ । मबाट हरदम पसिनाको अमिलो गन्ध आइरहन्छ । मैले आफ्नो वास्तविक रङ र स्वरूप गुमाइसकेको छु । मलाई तपाईं जति जीर्ण र फोहोर कल्पना गर्नुहुन्छ, मेरो यो एकालाप पढ्न तपाईंलाई त्यति नै मजा आउनेछ । यो एकालापको सफलता तपाईंको कल्पनाशीलतामा निर्भर छ । तर, म ग्यारेन्टी गर्छु, मेरो एकालापले तपाईंलाई त्यति नै मजा दिनेछ, जति मजा तपाईंहरूलाई कफी खाँदै गरिब पात्रका कथाहरू पढ्दा आउने गर्छ ।
आउनुस्, कथाको मजा लिनुस् र एकान्तमा बौद्धिक मैथुन गर्नुस् ।
मेरो एकालापको सुरुआत म केही थान प्रश्नहरूबाट गर्न चाहन्छु ।
के तपाईंलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीले कुन ब्रान्डको लुगा लगाउनुहुन्छ भन्ने थाहा छ ? हुन त यो कुरा तपाईंलाई थाहा हुन पनि सक्छ । किनभने प्रधानमन्त्री सुत्ने पलङ, उनका जुत्ता र उनका घडीहरूको मूल्य बेलाबेलामा समाचार बन्ने गरेका छन् । तर, मेरो अर्को प्रश्नको जवाफ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा छैन । प्रश्न हो— जब प्रधानमन्त्रीका लुगाहरू पुराना हुन्छन्, ती लुगाहरू कहाँ जान्छन् ?
एकाधबाहेक हामीले त्यस्ता कुनै महान् प्रधानमन्त्री पाएका छैनौं, जसको पोसाक संग्रहालयमा सुरक्षित गर्नलायक हुन्छ । त्यसैले मेरो लुगासम्बन्धी यो प्रश्नले तपाईंको दिमाग (यदि कतै बन्धकी राख्नुभएको छैन या त्यसमा ताल्चा लगाउनुभएको छैन भने) एक छिनका लागि भए पनि रन्थनिएको हुनुपर्छ ।
हुने–खानेहरूले आफ्ना लुगाहरू पुराना भएपछि घरेलु कामदार या तिनका आफन्तलाई दिने गर्छन् । केहीले बाढीपहिरोका बेला सुकुम्बासी या मुसहरजस्ता बस्तीका गरिबहरूका लागि दान दिने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरानो लुगा त्यसरी दान दिन्छन्/दिन्नन्, तपाईंलाई पक्कै पनि थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले लगाउने कमिज, पाइन्ट, गन्जी या कट्टुको नियति के हुन्छ ? उनको मोजाको भविष्य के हुन्छ ? जाडोमा उनले लगाउने पन्जा पुरानो भएपछि कता जान्छ ? उनका पुराना टोपी, टाई र मफलरहरू अहिले कहाँ छन् ? उनले स्नान गरिसकेपछि प्रयोग गर्ने टवेल या उनले पसिना या नाक पुछ्ने हाते रुमालहरू अहिले कुन हालतमा कहाँ छन् ? के यी प्रश्नहरू कहिल्यै तपाईंको दिमागमा उम्रिएका छन् ? पक्कै छैनन् । अब सोच्न थाल्नुस् । किनभने मेरोजस्तै ती पाइन्ट, गन्जी, कट्टु या रुमालहरूको पनि कुनै कथा हुन सक्छ । तिनका पनि खुसी र व्यथाहरू हुन सक्छन् । तिनले पनि कतै कसैलाई मैलेजस्तै आफ्नो कहानी या एकालाप सुनाइरहेका हुन सक्छन् ।
म कुनै बेला प्रधानमन्त्रीले लगाउने कमिज थिएँ । हुने–खानेहरू एउटै लुगा धेरैपटक लगाइरहँदैनन् । तिनले चाँडोचाँडो नयाँ लुगा किन्छन् । अझ प्रधानमन्त्रीका लुगाका लागि त राज्यले बजेट नै छुट्याएको हुन सक्छ । यस्तै ल्याप्स हुनै लागेको बजेटबाट असार मसान्तमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले हतारहतार कुनै सानदार मलको महँगो पसलबाट मलाई किनेर ल्याएका थिए । मेरो मूल्य कति हो, मलाई थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्रीका लागि भनेपछि मेरो वास्तविक मूल्यमा साहुले थप मूल्य जोड्यो । प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले त्यसमा आफ्नो कमिसन थपे । यसरी म मूल्यवान भएर प्रधानमन्त्री निवासमा छिरें ।
मेरा केही महिना आराममा बिते । मलाई गर्मी या जाडो भएन । म कहिल्यै पसिनाले निथ्रुक्क भइनँ । मलाई त्यतिबेला चरम गर्वको आभास भएको थियो । किनभने म प्रधानमन्त्रीको हरेक चिन्तन र चिन्तामा सामेल थिएँ । म सत्ता टिकाउने उनका षड्यन्त्रहरूमा सामेल थिएँ । म उनका कतिपय तोकहरूमा सामेल थिएँ । उनले गरेका हस्ताक्षरहरूमा सामेल थिएँ । उनका नजिकका आफन्तहरूलाई ठेक्कापट्टा दिलाउने उनको मनसाय र आदेशमा पनि सामेल थिएँ । म उनले माफियाहरूसित गरेका लेनदेन र वार्तालापहरूमा सामेल थिएँ । म उनले देश र जनतासित गरेका कपटपूर्ण वाचाहरूमा सामेल थिएँ ।
त्यहीबेला देशमा फैलिएको थियो एउटा अज्ञात रोग । कतिले देउता रिसाएकाले त्यो रोग फैलिएको हो भन्थे । कतिले त्यो रोगलाई मान्छेसित प्रकृतिले लिइरहेको प्रतिशोध ठान्थे । रोगको कारण र निवारणबारे वैज्ञानिकहरू अलमलमा थिए । बुद्धिजीवीहरू रोगमा राजनीति, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र मिसमास पारेर टेलिभिजनका पर्दामा बहस गर्न थालेका थिए ।
घाम उदाउँथ्यो । बत्ती पनि बल्थ्यो । तर, पनि त्यो अँध्यारो समय थियो । मान्छेका मनभित्रका उज्यालाहरू निभेका थिए । देश पूरै मौन थियो । मान्छेसितै डराइरहेका थिए मान्छेहरू । आफन्तसितै सशंकित भइरहेका थिए मान्छेहरू । रोकिएका थिए सुख र आनन्दका वार्तालापहरू । बन्द थिए मित्रहरूबीचका ठट्टाहरू । प्रेमी र प्रेमिकाहरूबीचको भेटघाट बन्द भएको थियो । मान्छेहरूले लिन छाडेका थिए आमाबाबुको आशीर्वाद । चुम्बनहरू हराएका थिए । स्पर्शहरू वर्जित भएका थिए । प्रजनन अंगहरूमा धमाधम ताल्चा लाग्न थालेका थिए । मान्छे अज्ञात रोगको भयले आत्तिएको थियो । ऐनामा आफ्नै प्रतिविम्बसित पनि तर्सिन थालेको थियो मान्छे । ठान्थ्यो, उसकै रूप धरेर कोही उसको घरमा जीवाणुु र विषाणुसहित प्रवेश गरेको छ । मान्छेका यात्राशील पाइलाहरू घरको संघारभित्र रोकिएका थिए । उसले आफूलाई माया गर्नेहरूलाई नै घरमा प्रवेश निषेध गरेको थियो । उसलाई हावामा शत्रुहरू ओहोरदोहोर गरिरहेको आभास भइरहेको थियो । उसले टेक्ने जमिन र उसले हेर्ने आकाशप्रति ऊ सशंकित थियो । यतिखेर मान्छे श्रृष्टिको सर्वाधिक दु:खी प्राणी सावित भएको थियो ।
यस्तोमा एक दिन कुनै सहयोगीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिदियो, ‘यो रोग पोसाकबाट पनि सर्छ । त्यसैले यो बेला पुराना पोसाकहरूको प्रयोग उपयुक्त छैन ।’
मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शरीरबाट उतारे । गन्जी, कट्टु र मोजा पनि फुकाले । सहयोगीले पन्जा लगाएको हातले हामीहरूलाई बडो उपेक्षापूर्वक एउटा पोलिथिनको झोलामा कोच्यो । अर्को सहयोगीले प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर थुपार्ने ठाउँमा राखिदियो । अर्को दिन नगरपालिकाको गाडी आयो । एउटाले हामीलाई कन्टेनरमा थन्क्यायो । हामी सबै आत्तियौं । आफ्नो समयको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिसको सुगन्धित वदनबाट एकाएक उत्रिएर एउटा भयावह फोहोर संसारमा प्रवेश गर्नुपर्दा म दु:खी भइसकेको थिएँ । डम्पिङसाइटमै पुगेपछि त मेरो होसै हरायो ।
होस खुल्दा म मधेसको एक गरिब मजदुरको शरीरमा थिएँ ।
देशबाट अज्ञात रोगको भय हटिसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री साविककै महलमा बिराजमान थिए र नयाँ कमिजमा ठाँटिएर माफियाका नाइकेहरूसित नयाँ ठेक्कापट्टाको कमिसन तय गरिरहेका थिए । उनी उसैगरी जनघाती निर्णयहरूमा तोक लगाइरहेका थिए । उसैगरी दमनका आदेश दिइरहेका थिए र उसैगरी जनताको मजाक उडाइरहेका थिए ।
म भने यतिन्जेलसम्म मैलो न मैलो भइसकेको थिएँ । ठाउँठाउँमा उध्रिइ र च्यातिइसकेको थिएँ । मैले आफ्नो वास्तविक पहिचान गुमाइसकेको थिएँ । तर, पहिचानको बहसको वातावरण कुण्ठित भइरहेको समयमा मैले मेरो पहिचानको मुद्दा उठोस् भन्ने कामना पनि राखिनँ । बस्, मैले सोच्न थालें, राजधानीको आलिसान महलमा बिराजमान प्रधानमन्त्रीको शरीरबाट उत्रिएर म टाढाको मधेसको एउटा गरिब श्रमिकको शरीरमा कसरी बस्न आइपुगें ! उसले कहाँ पायो मलाई ? मैले प्रधानमन्त्रीको सुकोमल देहदेखि गरिबको जीर्ण शरीरसम्मको यात्रा कसरी तय गरें ? जवाफ थिएन ।
तर, मैले अनुमान लगाएँ ।
सम्भवत: डम्पिङसाइटमा फोहोर उधिन्ने केटाकेटीहरूले मलाई फेला पारे । यसो नियाले । तिनीहरूको पातलो शरीरमा म फिट हुने कुरै भएन । उनीहरूले मलाई धोइपखाली गरे र कमिजको खाँचो परेको अर्को कुनै गरिबलाई बेचिदिए । पाएको पैसाले केहीले चुरोट खाए, केहीले चाउचाउ । सम्भवत: केही दिन त्यो गरिबले मलाई लगायो पनि । तर, उसको शरीरमा ब्रान्डेड कमिज देखेर कुनै कलेजनिरको चियापसलमा चिया खाँदै गरेका केही विद्यार्थी भाइबैनीहरूले उसलाई उल्लीबिल्ली पारे । अपमानबोधका कारणले उसले डेरामा पुगेर मलाई फुकाल्यो । साँझ धोइपखाली गरेर अर्को दिन उसले मलाई काठमाडौंको न्युरोडको सेकेन्ड ह्यान्ड लुगाहरूलाई नयाँ बनाएर बेच्ने एउटा साहुलाई सुम्पियो । सम्भवत: त्यसपछि म केही दिन उसकै फुटपाथ पसलमा लुगाहरूको डंगुरमा यता र उता भइरहें । सायद एक दिन एक जना सरकारी कर्मचारी सपरिवार न्युरोडमा किनमेलमा आए । उनीहरूले नजिकैको ब्रान्डेड पसलबाट आफ्ना लागि, श्रीमती र छोराछोरीका लागि महँगा लुगाहरू किने । तर, उनको घरमा एक वृद्ध पिता पनि थिए र त्यो दिन बाबुको मुख हेर्ने दिन पनि थियो । उनले मलाई रोजे र घर पुगेर पितालाई लगाइदिएर फोटो पनि खिचे । उनले साँझसम्म सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटोबारे आएका प्रतिक्रियाका हिसाबकिताब गर्दै बसे ।
सम्भवत: त्यहीताका मधेसमा बाढी आयो र हजारौं गरिबहरूको उठिबास भयो । उनीहरू बेघर भए । उनीहरूसित खाने कुुरा भएन । लगाउने लुगा पनि भएन । वृद्ध पितालाई दया लाग्यो र उनले मलाई लुगा संकलन गर्न आएको एक टोलीलाई सुम्पिदिए । यतिन्जेल म बेहोसीमै थिएँ । होसमा आउँदा भने म बाढीपीडित एक गरिब श्रमिकको शरीरमा थिएँ ।
केही दिनपछि बाढीप्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न हेलिकप्टर चढेर प्रधानमन्त्री आए । उनले बाढीपीडितहरूलाई चिउरा, चाउचाउ र चियापत्तिका पाकेटहरू पनि बाँडे । बाँड्दाबाँड्दै प्रधानमन्त्री एक जना गरिबलाई देखेर जिल्ल परे । स्तब्ध भए । होइन, उनी गरिबलाई देखेर स्तब्ध भएका थिएनन् । किनभने गरिबीसित उनी परिचित छन् । उनीजस्ता पात्रहरूकै कारण गरिबी देशमा संस्थागत भएको भन्ने विषयमा उनी जानकार थिए । उनी स्तब्ध त मलाई देखेर भएका थिए । किनभने कुनै बेला उनैले पहिरिएको कमिज एउटा नयाँ देहसहित ठिंग उनका सामु उभिएको थियो ।
जसरी गरिब एउटा प्रश्न हो । जसरी भोको मान्छेको आँखा एउटा प्रश्न हो । त्यसरी नै मैलो कमिज पनि एउटा खतरनाक प्रश्न हो । सम्भवत: प्रधानमन्त्री त्यही प्रश्नसित आत्तिएका थिए । म मैलो भएकाले प्रधानमन्त्रीले मलाई अँगालो हाल्न सकेनन् । मप्रति आत्मीयता प्रकट गर्न पनि सकेनन् । उनलाई आफ्नै आत्मा या आफ्नै अतीतको कुनै प्रतिकृति हेरिरहेको आभास भएको थियो सायद । त्यो आभासले उनलाई बिसन्चो गर्‍यो । उनलाई ज्वरो आयो ।
लामै समयसम्म प्रधानमन्त्री बिरामी भए भन्ने कुरा मुलुकसँगै मैले पनि थाहा पाएँ । उनी ज्वरोमै बर्बराउन थालेका थिए रे १ सम्भवत: उनी बेलाबेला मलाई सम्झन्थे र झनै आत्तिन्थे । उनले अरू कसैलाई आफ्नो समस्या बताउन पनि सकेका थिएनन् । कुनै बेला उनैले सगर्व धारण गरेको उनकै कमिज अहिले एउटा गरिब र भोको मान्छेको शरीरमा टाँस्सिएको छ । यो त उनकै लागि पनि लज्जाको विषय थियो । त्यस्तो विषय अरूलाई भनेर कसरी सार्वजनिक गर्नु ? त्यही कारणले उनको रोग झन्झन् बल्झिएको हुनुपर्छ र उनी झन्झन् कमजोर बन्दै गएको हुनुपर्छ ।
तर, यति नै कारणले उनी हराइहाल्नुपर्ने त थिएन । अचम्मको कुरा त के भने, उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइने उनको सरकारी महलमा उनी बेपत्ता भएको कसैले चालै पाएन । तर, यसो भनिहाल्न पनि मिल्दैन । उनी सुटुक्क गेटबाट निस्कँदा एउटा भुस्याहा कुुकुरले त उनलाई देखेकै थियो । तर, कसैले उसको बयान लिएन । नत्र कुकुरले भन्ने थियो, ‘प्रधानमन्त्री पूरै नाङ्गो त हुुनहुन्थेन । उहाँले कट्टु लगाउनुभएको थियो । उहाँको खुट्टामा मोजा पनि थियो । शरीरमा कमिज पो थिएन, शिरमा टोपी त थियो । उहाँको गलामा मफलर पनि थियो र हातमा पन्जा पनि । गेटबाट निस्केको केहीबेरसम्म त मैले उहाँको शरीर पनि देखेकै हुँ  । तर, केही क्षणमै सडकमा उहाँको शरीर हरायो र उहाँको टोपी, मफलर, कट्टु र मोजा मात्र हिँडिरहेको थियो ।’
एक दिन मलाई धारण गरिरहेको शरीरले एउटा दलदलमा केही चलायमान वस्तु भास्सिँदै गरेको देख्यो । उसले दलदलबाट त्यो वस्तुलाई निकाल्यो । हेर्दा मान्छेकै जस्तो आकृति त देखिन्थ्यो । तर, त्यो आकृतिभित्र मान्छे थिएन । बस् माथि टोपी थियो, घाँटीमा मफलर थियो, अलिक तल कट्टु र अझै तल मोजा थियो ।
उसले हिलो र मैलोमा लतपतिएको त्यो आकृतिलाई घरसम्म ल्याउन आवश्यक ठानेन । किनभने त्यो देह र आत्माबिनाको आकृति थियो । तर, मलाई धारण गरेको त्यो मनुवा दयालु थियो । उसले आफ्नो कछाड फुकाल्यो र त्यसैले त्यो मैलो र अमूर्त आकृतिलाई छोपिदियो । त्यो उसले मानवजस्तै देखिने आकृतिका लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा उच्च सम्मान थियो ।
यो सबै दृश्य मैले देखेकै हुँ । कुनै बेला म उनको देहसित अभ्यस्त थिएँ । त्यसैले त्यो आकृति प्रधानमन्त्रीकै हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो । तर, म कमिज न हुँ । कमिजले कसरी बोल्छ ? कमिजले के बोल्छ ? त्यसमाथि मैलो न मैलो कमिज ! मैलो मान्छेको कुरा नपत्याउने समाजमा मैलो कमिजको कुरा झन् कसले पत्याउने ?
अचानक हराएका प्रधानमन्त्री उसरी नै अचानक फेरि प्रधानमन्त्री निवासमा देखापरे । उनको शरीरभरि हिलो लागेको थियो । उनको हुलिया देखेर सबै चकित भए । सहयोगीहरूले उनलाई फेरि नयाँ टोपी, नयाँ मफलर, नयाँ गन्जी, नयाँ कमिज, नयाँ कट्टु र नयाँ पाइन्ट लगाइदिए । चिकित्सकहरूले फेरि उनको मुटुमा पेसमेकर राखिदिए । निर्जीव देखिएका प्रधानमन्त्री फेरि चलायमान देखिए । सिंहदरबारमा एक प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर हराएका प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक गरियो ।
राति प्रधानमन्त्री निवासमा आतिसबाजी गरियो ।
त्यो हर्षोल्लास रातभरि मात्र कायम रह्यो ।
बिहान भने फेरि अर्को अप्रिय खबर सार्वजनिक भइहाल्यो, ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासमा मैलो न मैलो कछाडमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नुभयो ।’
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो । रिपोर्टमा लेखिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको आकृतिभित्र उहाँको देह नै थिएन । आत्मा पनि थिएन ।’
पूरै राज्यसंयन्त्र कछाडको मालिकको खोजीमा लाग्यो । अन्तत: मलाई धारण गरेको देह गिरफ्तार भयो । न्यायालयले उसलाई मृत्युदण्डको घोषणा गर्‍यो । कछाड नभएकाले उसको तल्लो अंग नग्न अवस्थामा थियो । उसले आफूलाई झुन्ड्याउन आएकाहरूसित भन्यो, ‘जब म तल नांगै छु भने माथि किन ढाक्ने मैले ?’
त्यसैले आफूले सूलीमा झुन्डिनुअघि मभित्रको गरिब देहले मलाई आफूबाट अलग्यायो र नजिकैको किलोमा झुन्ड्याइदियो ।
म झुन्डिएको किलोबाट पूरै मुलुक देखिन्छ । मुलुकको पूरै राजनीति पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका नयाँ पोसाकहरू पनि देखिन्छन् । नयाँ पोसाकका प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखिन्छन् । मैले नदेखेको र नबुझेको एउटै कुरा छ– प्रधानमन्त्रीका पुराना पोसाकहरू कहाँ गायब हुन्छन् ?
प्रकाशित : असार २७, २०७७ १०:०२